यस्तो छ हस्तमैथुनको इतिहास ! – Click Khabar
यस्तो छ हस्तमैथुनको इतिहास !
६ सय वर्ष इसापूर्वमा मिश्रको इतिहासमा हस्तमैथुनको महत्त्व दर्साइएको छ । ऐतिहासिक चित्रले देखाएको छ कि त्यतिबेला ठूलो संख्यामा पुरुषहरू कुनै खास उपलक्ष्यमा नील नदीको तटमा उभिएर हस्तमैथुन गर्थे र आफ्नो वीर्य नदीमा प्रवाह गर्थे । केही चित्रमा पुरुषहरू नदीको तटमा उभिएर दुई हातले मैथुन गरिरहेको देखाइएको छ । त्यति बेलाका मानिसहरूमा जब ईश्वरले हस्तमैथुन गर्छन्, तब चमत्कार हुन्छ भन्ने विश्वास थियो ।
नाई नभन्नू ल २ मागीत गाएसंगै चर्चामा आएका प्रेम परियार अब नायक बन्ने !
कुसुमकोला घटनाको संसदीय समितिले लियो जानकारी
पूर्ब पूर्वडीआईजी रञ्जनको सजाय छुट बिरुद्धको मुद्धा पेसीमा चढ्यो
नेपालको नक्सा सार्वजनीक